​युट्युबमा भिडियो डाउनलोड गर्ने सजिला दुई ट्रिक
Tuesday, 17 Apr, 2018 3:19 PM
युट्युबमा भिडियो डाउनलोड गर्दा कस्तो उपाय अपनाउनु भएको छ ? पक्कै कुनै डाउनलोडरको भर पर्ने गर्नुभएको होला । तर, तपाईंलाई सजिला दुई तरिका दिन्छौं, पढेपछि पक्कै दंग पर्नुहुन्छ । नयाँ ट्रिक सिकेपछि तपाईं भन्नुहुन्छ, यस्तो सजिलो पो रहेछ ! सजिलै सिक्नुहोस् सजिला ट्रिक :
–युट्युबमा आफूलाई मनपर्ने भिडियो सर्च गर्नुहोस्
–युट्युबको url मा गएर youtube शब्दको अन्तिम ३ अक्षर ube हटाउनुहोस् र इन्टर दबाउनुहोस् ।
–अब नयाँ पेज खुल्छ । उक्त पेजमा भिडियोलाई mp3 वा mp4 फम्र्याटमा डाउनलोड गर्ने विकल्प हुन्छ ।
–आफूले डाउनलोड गर्न चाहेको फम्र्याट छान्नुहोस् । यसमा भिडियो क्वालिटीको विकल्प हुन्छ । रेकर्ड विकल्पमा क्लिक गरेर सजिलै भिडियो डाउनलोड गर्न सकिन्छ ।
–युट्युबको url मा गएर www. हटाउनुहोस् र उक्त ठाउँमा ठाउँमा ss राख्नुहोस्, अनि इन्टर दबाउनुहोस् ।